ကော်ဖီချစ်သူပါဗျာ — MYSTERY ZILLION
May 2009 edited May 2009 in မိတ်ဆက်
ကျွန်တော်က မန္တလေးသူ စစ်စစ် ( ရေမရော) ဖြစ်လို့ "ဗျာ" "ကျွန်တော်" ဆိုပြီး သုံး တာကို
အပြစ်မမြင် မျက်စိမနောက် စေလိုပါဘူး။
မသိတာ မတတ်တာ တွေကို သင်ပြပေးစေလိုပါတယ်။:6:
P.s> ဧကန်အမှန်စင်စစ် မိန်းကလေးဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။ :d
WelCome To MyStErYzIllIon ZilLioN .....!
Hi fri: Welcome to MZ .
နောက်ဆုံးက ps အတွက်က သန်းခေါင်စရင်း မွေးစရင်းနဲ့ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာလိုပါတယ် ခင်ဗျာ
ဗျာ ကော်ဖီချစ်သူဆိုလားပဲ တော်ဖီချစ်သူ ဆိုလား:D:D:D
ကျွန်တော်တို ့MZ ကနေကြိုဆိုပါတယ်
နောက်ဆုံး p.s ကို divinity ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ..mz က ကြိုုဆိုပါတယ်...(ကိုယ်ပိုင်သလိုလေသံနဲ့)...အခုလို မင်းဘာဖြစ်လာတဲ့အတွက် မသိတာမေး..သိတာပေးလို မတွန့်တိုကြေးနော်..အဟီ:D
ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ mz အဖွဲ့ထဲဝင်တဲ့အတွက်။ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကိုကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။မသိတာရှိရင် ကြိုက်တာမေး အကူညီလိုရင်လည်းတောင်းပေါ့ mz ကအစ်ကိုတွေက အရမ်းသဘောကောင်းပါတယ်။မြှောက်ပြောတာဟုတ်ဘူးနော် တကယ်သဘောကောင်းတာ:67::67::67::67::67::67::67:...........
တွေ့ရ ဆုံရ ကြုံရတာ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ
အားလုံးပဲ အခုလို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ၀မ်းပန်းတသာ ၀မ်းမြောက်၀မ်းသာ နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုကြိုဆိုဆို ဖက်လှဲတကင်း .......( ထည့်နိုင်သမျှ အထူးပြုအားလုံး ) ရှိတဲ့ အတွက် mz အဖွဲ့၀င်အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
divinity ,Tsuna lade ခင်ဗျာ
သန်းခေါင်စားရင်းကို ရက်ကွက်ရုံးက ည 12 နာရီတိတိ လာယူရမယ်ဆိုလို့ သွားမယူရသေးတာ
17 နှစ် ရှိပါပြီဗျာ။ မွေးစာရင်းကတော့ ဘေးအိမ်က ကိုသာအေးတို့ လင်မယား ရန်ဖြစ်တုန်းမွေးတာ လို့ အမေ့ ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။ <<<<< Update news
U r warmly welcome to mysteryzillion....
ဧကန်အမှန်စင်စစ် မိန်းကလေးဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။ :d
MZ ကြိုဆိုပါတယ် မသိတာရှိရင်မေးပါ(ကျွန်တော်ကိုမဟုတ်ဘူးနော် MZ က admin တွေကို) သိတာရှိရင် ၀င်ပြီးပြောပါ။:D:D:D
တိတ်မယုံချင်ဘူး မိန်းခလေးဆိုတာ ဘယ်လိုတတ်တေပြခိုင်းရမလဲ မတိ
မင်္ဂလာပါ ကြိုဆိုပါတယ်. ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာ..
Welcome to Mysteryzillion
Let's Share Zillions of Knowledge........